Boronkiito (Bronchitis) | Galmudugnews.net
Boronkiito waa soo bararidda dhinacyada marinnada hawada ee loo yaqaanno bronchioles ee ku jira sanbabada. Bararku wuxuu keenaa dheecaan ka badan kan caadiga ah inuu sameysmo. Kaasi wuxuu xannibi karayaa maritaanka hawadu ay mari lahayd sanbabada waxaana laga yaabaa iney waxyeello u geysato sanbabada.
Boronkiitada daran waa cudur waqti dheer ee sanbabada. Waa mid ka mid ah cudurrada koox cudurro sanbabbo ah oo loo yaqaanno COPD ama cudurka sanbabka xanniba ee dara (chronic obstructive pulmonary disease).
Waxyeelladu badanaa waxay ka sii dartaa waqti ka dib lamana daaweyn karayo.
• Qufaq is-daba-joog ah
• Feedho xanuun leh qufac ama neefsasho qoto dheer
• Jidh xanuun
• Sigaar cabid
• Hawo wasaqowda
• Cudur sanbab sida asmada ama neefta ama sababada oo dhaawacma
• Isticmaalidda biyo saare qaabka jidhka iyo feedho riixe si loo dabciyo xabka sanbabadaada ka imaanaya. Waa lagu bari doonaa sida taas
Si aad si Fudud ugu Neefsato
• Ka fogaanshada waxyaabaha lura sanbabada sida wasaqowga hawada, habaaska iyo gaasaska.
• U seexo iyadoo jidhkaaga qaybta kore ay kor u qaadan tahay. Isticmaal barkin ama madaxa sariirtaada kor u qaad.
Isla markiiba wac takhtarkaaga haddii:
• Aad feedho xanuun ama feedho giigsan qabtid